Porn Science and Science Deniers (Wilson နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
porn သိပ္ပံနှင့်သိပ္ပံ Deniers (Wilson ကအတူအင်တာဗျူး)
မှတ်ချက်: porn သိပ္ပံ deniers အားဖြင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှု၏ဆှေးနှေးခ ဤနေရာတွင်စတင်, မိနစ် 28 မှာ။
(1,000 porn လေ့လာမှုများကျော်) ပင်မ YBOP သုတေသနစာမျက်နှာ
porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com")
Update ကို (နွေရာသီ, 2019): မေလ 8, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်, MD တစ်ဦးအသရေဖျက်မှုတင်သွင်း se နှုန်း ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ဆန့်ကျင်။ ဇူလိုင်လ 24, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်ကသူ့အသရေဖျက်မှုတိုင်ကြားချက်ပြင်ဆင် (အလားတူနှောင့်ယှက်၏ 1 သည်အခြား Prause သားကောင်များအနေဖြင့် (2) ဆေးစစ်တိုင်ကြားချက်တစ်ခုအန္တရာယ်ရှိတဲ့တက္ကဆက်ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့, (3) မှားယွင်းသောဒေါက်တာဟီလ်တန်သည်သူ၏အထောက်အထားများလိမ်ခဲ့ကွောငျးစွပ်စွဲချက်များနှင့် (9) ကျမ်းကျိန်လွှာကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ယောဟနျသ Adler, MD, ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes,
နောက်ဆုံးသတင်းများ (၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လ) တရားရုံး၏စီရင်ချက်များသည် Prause အားကျူးလွန်ခံရသူမဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်သည်. ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မတ်လတွင်၊ Prause သည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သူမ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလိမ်လည်မှုများ (ငါ့ကိုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း) ဖြင့်ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ရန်အကြောင်းမဲ့ယာယီတားဆီးမိန့်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ တားမြစ်ထားသည့်အမိန့်တောင်းခံရန် Prause ၏တောင်းဆိုချက်အရသူမကသူမကို YBOP နှင့် Twitter တွင်တင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။မုသားသက်သေခံမှုသည် Prause တွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ) ။ တရားမ ၀ င်စနစ် (TRO) ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းဖြင့်ငါ့ကိုနှုတ်ဆိတ်။ နှောင့်ယှက်ရန် Prause ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိပြည်နယ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်ကိုတားမြစ်သည့်အမိန့်ရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။. အဂတိတရားအားဖြင့်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်အားတိတ်ဆိတ်စွာနှိပ်စက်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိခြင်းကိုတားဆီးရန်အတွက်တားမြစ်မိန့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်က Prause အား Wilson ၏ရှေ့နေစရိတ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။